တစ်နေ့တာ The Canton ပြပွဲသို့ Countdown
Aprပြီမှစ။ တစ်နေ့တာ Countdown 15, 2021 Aprပြီလသို့ 24, 2021. ကျွန်ုပ်တို့၏ BS / EUROPE / ITALY Standard Switches နှင့် Sockets များကိုသင့်အားမိတ်ဆက်ပေးပါမည်! တွန့်ဆုတ်ခြင်းနှင့်ငါတို့နှင့် chat ဖို့လာ!
2 အဆိုပါ Canton တရားမျှတသောနေ့ရက်များ Countdown
2 Canton Fair သို့ရက်ပေါင်းများစွာပြန်လည်တွက်ချက်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Smart zigbee အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပါမည် 3.0 မင်းအတွက်ပြောင်းမယ်!
၁၂၉ ကြိမ်မြောက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော Canton Fair အစီအစဉ်： 10:00-12:00 အာရှစျေးကွက် 14:00-16:00 အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ 16:00-18:00 အမေရိကန်စျေးကွက် 20:00-22:00 အာဖရိက 22:00-24:00 အမေရိက
123နောက်>...67 စာမျက်နှာ 1 ၏ 67